Translations < Somali < Administration < GlotPress – WordPress.org
Filter ↓ • Sort ↓ • All (3,363) • Translated (261) • Untranslated (3,102) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
Isbedelladii waa la kaydiyey.	 Details
Rakibidda Kaabaha Plugin: %s	 Details
Rakibidda Kaabaha Plugin: %s
2011-12-25 08:57:43 UTC
Isticmaalayaasha cusbi waxay helin email u sheegaya in isticmaale ahaan loogu daray webkaaga. Waxaa email-kaas sidoo kale la socda ereysirka (furaha) isticmaalaha. Sax bokiskaan haddii aadan rabin in isticmaaluhu email helo.	 Details
Isticmaalayaasha cusbi waxay helin email u sheegaya in isticmaale ahaan loogu daray webkaaga. Waxaa email-kaas sidoo kale la socda ereysirka (furaha) isticmaalaha. Sax bokiskaan haddii aadan rabin in isticmaaluhu email helo.
2011-12-31 08:05:59 UTC
Geli cinwaanka email ama isticmaalaha ee isticmaale ka mid ah shabakaddaan si aad ugu casuntid webkaan. Qofkaas waxaa loo dirin email ka codsanaya in uu xaqiijiyo casumaadda.	 Details
Geli cinwaanka email ama isticmaalaha ee isticmaale ka mid ah shabakaddaan si aad ugu casuntid webkaan. Qofkaas waxaa loo dirin email ka codsanaya in uu xaqiijiyo casumaadda.
2011-12-31 09:02:23 UTC